Emakhaya nasezizindlini kukhona izivakashi ezingamenywa ngokucacile azijabulisi abanikazi. Ngakho-ke, ngamunye wethu uzama ukuletha izinkamba namagundane aphume ekhaya. Kodwa, uma kungenzima kakhulu ukunciphisa amagundane, ngoba kungenzeka ukuthenga ama-mousetraps noma ukuthululela ukudla ebuhlungu, khona-ke kunzima nakakhulu ngamaphungushe. Cishe bonke ngesikhathi esifanele bacatshangwa ukuthi banganciphisa kanjani izindlala namagundane. Singakunika izimpendulo zemibuzo mayelana nokuthi ungayithola kanjani amaqhude.
Ngakho, ukususa kanjani izindiza namagundane? Yiqiniso, abaningi abathandi amantombazane. Kubonakala sengathi abantu bayamabi futhi abajabulisayo. Kodwa, kukhona nalabo abacabangela amagundane ukuba abe izidalwa ezinhle ezithandekayo. Futhi angaphansi kwalabo abaphatha lezi zilwane ngokungathandi. Kodwa amaphele ayithandi cishe konke. Bambalwa abantu bacabanga ukuthi amahlombe yizilwanyana ezifuywayo. Ngokuyinhloko, izinambuzane zingenza wonke umuntu aphume. Ngakho-ke, ukuze bangakhathazeki ngeze futhi bangaboni ukuthi bawabheke ngamapuleti ahlanzekile, wonke umuntu uzama ukuthola amahlumela ngaphandle kwanoma iyiphi imali. Yini okufanele uyenze nalezi zifuywayo ezingadingeki kakhulu? Indlela yokubhekana nabo, ukuze kube ngokushesha futhi kuphumelele? Yiqiniso, kunezindlela eziningi ezahlukene ongawaqeda izindlala endlini ngokukodwa. Kodwa, iqiniso liwukuthi amakhemikhali ahlukene amakhemikhali awela ezinqabeni zezinambuzane, athwala ubuthi e-house futhi, efa ngokwawo, aphinde aphindiselele ngendlela eya kumuntu, njengoba ehamba kancane kancane nabo. Futhi, kunezikhathi lapho amakhemikhali ephuma khona futhi ahlale efonini nasezingutsheni. Futhi yini esingayisho mayelana nosongo lwezilwane ezifuywayo ezinobuthi ezingadla ngengozi okuthile okukhona amakhemikhali. Phela, kucacile ukuthi isilwane sidinga umthamo omncane kakhulu ukuze ubuhlungu kakhulu. Kumele ukhumbule ukuthi izinkamba azifi ngalutho ubusuku bonke. Ukuze uziqede, kufanele ulinde amasonto ambalwa, noma ngisho nenyanga. Yingakho kufanele ngaso sonke isikhathi uzame ukugcina ikhishi ekuhlanzeni okuphelele ukuze imikhosi ingaboni isizathu sokuza kuwe. Kodwa, uma kwenzeka konke, ungacabangi ukuthi njengoba sebevele kakade, akudingeki ukuba uhlanze noma yini. Ukuhlanza ikhikhishi lakho, izinambuzane ezihamba phambili zizohamba. Ngakho-ke, hlaziya njalo imvuthu, ugeze izitsha, ungashiyi ukudla ukuze utholakale ngokukhululekile. Futhi, udinga ukumboza yonke ipinth ngekhambi lokulwa nalezi zinambuzane, futhi, ngaphezu kwakho konke, uthole ama-cock and venison. Yiqiniso, izidleke eziningi zingaphansi, ngakho-ke kunzima kakhulu ukuzithola. Kodwa, kusadingeka sikhumbule ukuthi izinkathi azithandi amakhaza futhi zihlale zibheke izindawo ezifudumele endlini. Cabanga ngokuthi yikuphi okungaba khona indawo enjalo ekhaya, bese uhlola. Mhlawumbe unenhlanhla, futhi uzothola isidleke samaphere. Kulesi simo, ukunqoba ukuhlaselwa okunjalo kungaba ngokushesha futhi kulula.
Ngandlela-thile, ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuphila kwamaphale lungasiza kakhulu ekubhujisweni kwabo. Isibonelo, kuvela ukuthi i-cockroach ayikwazi ukuhlala ngaphandle kwamanzi nhlobo. Abaningi bakholelwa ukuthi amaphepho aphuma ebusuku ukuze adle. Eqinisweni, endaweni yokuqala, ngaphansi kwesembozo sobusuku, bahlezi emigqeni ngemigqa emihle emigodini yokugeza futhi badle izitsha, befuna ukuphuza okuningi kunalokho. Ngendlela, uma i-cockroach idla ubuthi futhi isiphuza amanzi ngokushesha, khona-ke ubuthi onalo abusebenzi nje. Yilokho okubangela ukuthi izindlu eziningi azikwazi ukukhipha lezi zinambuzane iminyaka. Izivakashi ze-baleen kuphela zikwazi ukuthola amanzi ngokukhululekile, ngakho zibekezelela ubuthi ngokuphepha. Ngaphezu kwalokho, ukudla kwezidalwa ezinjalo akudingeki neze.
Izinkukhu azikwazi ukwabelana ngama-experiences nokudlulisa ulwazi. Ngakho-ke, akufanele neze ukhathazeke, ucabanga ukuthi uma i-cockroach enobuthi ikwazi ukufika esidlekeni, izokwazisa ngempela izihlobo ngamakhemikhali ekudleni futhi izoyeka ukudla ukuze ingashona. Eqinisweni, konke kubukeka kuningi kakhulu. Uma i-cockroach enobuthi ifinyelela esidlekeni, ifa lapho, futhi izihlobo zayo zidla ngokushesha umfowabo ofile futhi nazo ziyenobuthi. Ngakho-ke, ukuntuleka kwekhono lokudlulisela isipiliyoni kubalulekile kulabo abaye banquma ukuqeda le nhlekelele.
Ukuze ushayela izinkamba endlini yakho, ungasebenzisa izikhambi ezihlukahlukene zabantu. Enye yazo, yebo, i-boric acid. Isici salo ukuthi lesi sidakamizwa asihlali ngaso sonke isikhathi sichitha amahlumela. Kodwa, kubangele ukuzwa okungathandeki kakhulu nokubamba. Lezi zinambuzane zikhumbula ukuthi uma udla kule ndlu, kuyoba kubi. Ngakho-ke, akasoze abuyele ezindaweni lapho ayegula khona futhi ngandlela-thile waba ne-poisoned. Nakuba ama-cockle awakwazi ukubizwa ngokuthi izidalwa ezihlakaniphile kakhulu, namanje anezici ezithile zokucabanga futhi angakhumbula imininingwane engalungile mayelana nesifundo esithile. Ngokuvamile, i-cockroach isidalwa esiyinqaba kakhulu. Ithanda izinto ezikhanyayo, njalo ihlola yonke into iphindwe. Uma into entsha ivela ekamelweni, zonke izinja kumele ziphendukele kuyo ukuze zifunde. Yiqiniso, konke lokhu kwenzeka uma kungekho muntu ekhaya.
Iqiniso lokuthi izindiza zikhumbule konke futhi aziphindeli libuyele lapho "zicasuliwe khona" zingasetshenziswa ngokuphelele. Kudingeka ukuthatha amagremu ayi-boric acid bese ufafaza ngokuphelele nazo zonke izindawo zendawo ephilayo etholakalayo kuwe. Ngaphezu kwalokho, i-boric acid ukuthi ayikwazi ukulimaza abantu noma izilwane ezifuywayo. Ungayisebenzisa ngokuphepha, ungaqapheli ukuthi umuntu angathola ubuthi. Eqinisweni, lena ingenye yalezi zinja ngokuqinisekile ezisiza i-boric acid ukuze izuze emakhemikhali akhethekile. Mhlawumbe, amaphele azozizwa enobuthi bese ezama ukushiya indlu yakho. Le ndlela ingacatshangwa ukuthi iyinhlanhla, ngoba izinambuzane zihlala ziqinile, kodwa zizoshiya indlu yakho kuze kube phakade. Ukuze ulungise umphumela, ungakwazi ukuhlunga amagremu amahlanu ka-asidi nge-yolk, udwebe amabhola amancane, owomile cishe ihora futhi usakaze nxazonke zendlu. Izinkukhu ezinobuthi nge-boric acid, ngisho noma zivele zithinte ibhola. Ngale ndlela, ngokuqinisekile uyobaxosha noma ubhubhise bonke.
Izindaba ezibalulekile ngonyaka we-Tiger
Indlela yokwabela ngokufanele isikhathi sakho
Ungaqala kanjani ukuhlanza indlu?
Ingabe i-porridges eyenziwe ngomumo iwusizo?
Usuku Lomakhi 2016 eRussia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan. Ukuhalalisela okusemthethweni, okuhlekisayo nokuhlekisayo kweSuku Lomhlahlandlela weHhovisi evesini, i-prose, izingoma, izithombe, amakhadikhadi
Indlela yokwenza ama-cinnamon amnandi emiqulu yesiSwidi, iresiphi
Pike perch in soufflé ushizi
Ukuzijabulisa komuntu nomlingiswa wakhe
Ukwelashwa kwemifantu ngamakhambi omuntu
Ungenza kanjani amadolo akho amahle futhi ahlungwe kahle?
I-polycystic ovary: amalungiselelo yokwelapha
Izithelo ze-smoothies ezinamafutha